Infant Botulism | Mapeji evaravara ehurukuro
zvanga zvine utachiona uhu mucheche
Inotyisa yehuchi nemashira emapuranga mucheche
Kwete uchi uye kwete mapurosirasi kusvikira zvishoma 1. bhavhudhe
Izvozvo hazvizivikanwi asi chirwere chakakomba zvikuru muchechecheche mwana mucheche botulism. Zvanga zvine utachiona uhu rinobva muchiLatin botulus (soseji), anonzi nyama chepfu uye upenyu kutyisidzira, maererano botulinum toxin (Clostridium botulinum utachiona) kunokonzerwa chepfu.
Chirwere chemucheche chinosvibisa uchi kana mapira
Sezvo mutakuri wehutsanana ndiko kuwedzerwa kweuchi kana mapirasi maple kuti sweeten z. Sezvo teas kana mwana weparridge anonzi. Uchi inonaka hunonaka uye hunofadza kudya, iyo inoshandiswawo mukurapa. Muto wegoridhe unopiwa hupenyu hwehutano hwakawanda uye asi chikafu ichi hachikwanisi kuverenga. Kuti uuraye kudya kwebhakitiriya kunofanirwa kupisa pamusoro pe 120 ° digres kwenguva refu. Izvi hazviitike neuchi. Ndiye chibereko chechisikigo saka saka anopiwawo mune zvezvitoro.
Infant Botulism - Njodzi kune vacheche kuburikidza nouchi
Havaratidzi conserved kana hermetically chisimbiso zvokudya, saka uchi kana Maple manyuchi, izvo zvave utachiona pamwe toxin, iyo spore ndinoumba utachiona uye kusvika kumagumo iri intestinal kasvisto.
In vacheche kusvikira gore rimwe, kuzvidzivirira kupfuura 6 mwedzi, mamwe kusagadzikana muviri kudzivirira uye simba intestinal kasvisto, uturu zvifambiswe kuburikidza intestinal septum kupinda muropa uye kubvira ipapo pairi zvikanzwika etsinga harinzwi iri peripheral tsinga apo kusunungurwa inokosha neuronal Nhume yeMutumwa inodzivirirwa.
Iyo inopisa chepfu inovhara kuisa chiratidzo pakati pemitsipa nemisungo. A zvinokambaira kuoma zvose muviri nenyere kumatunhu uye kumisa ura ndiye chakakomba mugumisiro. Izvozvo zvinokonzerwa nehuputi hazviwanzoonekwa nguva dzose, saka kazhinji zviratidzo zvinongowanikwa mushure memazuva, kunyange masvondo. Kwakaderera ziso tsandanyama, kushaya zvaanoita chiso chake, kuoma kufema tsandanyama kusvikira kupfupika mweya uye kumira kufema, pakuparadza, uye tsandanyama simba pamusoro zvetsandanyama nemapfupa ino tiri zviratidzo nomuchetura kubudikidza botulinum uye kunogona rufu kana kwete pakarepo, nechimbichimbi uye yevanorwara zvikuru. Pasi pekuregererwa kwakakwana kwekurapa kunogona kuitika asi iwe unofanirwa kuverenga pamwe nekugadzirisa kukanganisa.
Gore roga roga nyaya yemucheche yekusvini inoshushwa kuna Robert Koch Institute muBerlin. Zvidzidzo pamusoro pehuwandu hwehuwandu hwehupfu uye zvinogadziriswa zvave zvichiitwa muEurope kubva ku1976, mushure mekunge nyaya yekutanga yaitika uye yakaonekwa muAmerica. Mamwe maitiro akaonekwa zvishoma nezvishoma muAustralia, US uye nzvimbo yeJapan. Iko kunewo kubatana ne kamwe kamwe kamufa kufa syndrome. MuEurope, kune basa rekuzivisa pasi peChirwere Chekuchengetedzwa kweMutemo.
Hutano mwana nekuda, kusvikira wokutanga rokuberekwa inofanira kupiwa dose uchi uye mumeporo manyuchi kuti zvanga zvine utachiona uhu runamazuva kusimukira munzira kunzvenga ngozi.
In vacheche, vana, kuyaruka uye vakuru, pamwe zvakazara kushanda intestinal kasvisto uye utano muura septum, kuti toxin inenge yabudiswa, pasina iro inopinda muropa muviri, sezvo kunoitika kuburikidza dzinowanikwa uchi yakaderera mishonga. Ikokunyorwa kwehutsinye mumadzimai ekuyamwisa avo vakatora uchi hazvibvumirwi.
Kusiyana neizvi, zvisinei, iyo maronda uye kurapa kurapwa kwezviputi zvine uchi. Nenzira yakawanda, inofanira kuonekwa kuti munhu anofanira kurega kutapira kudya kwevana, mapepa akaitwa kumba uye tei / zvinwiwa zvachose, sezvo izvi zvinogona kukonzera uye zvinokonzera hutachiwana kana zvirwere.
Sezvineiwo, nyaya yekutanga yekutemwa kwebucheche yakawanikwa mu1976 muCalifornia. MuGermany, kwakave nekuenzanisa kweimwe nyaya yakadaro gore negore kubvira 1996. Mumuviri wemwana inokonzera tsvina inokura. Zvisinei, zvinogona kutora mazuva mashomanana kusvika mavhiki kuitira kuti zviratidzo zvive pachena. Saka, zvakaoma zvikuru kuvanachiremba kuti vaone kusangana pakati pezvokudya nezvirwere. Kana iyo inopini inopinda muropa neropa, inoparidzwa mumuviri. Iko kunonamatira kumagumo emagetsi uye kunodzivirira matanho anokosha ipapo, akadai semasuru fractures. Chigumisiro chacho ndechekuora mutezo. Zvinosuruvarisa, semunhu mukuru, haugone kubata mwana ne antitoxin.